Iividiyo ezingama-360º kwiselfowuni, yonke into ekufuneka uyazi ngayo | Iindaba zeGajethi
Iividiyo ezingama-360º ziya ngokuya zisiba yimfashini, kwaye leyo yinto enokwenzeka yokubonelela ngomxholo okwenyani ovela kumaqonga aphambili okubukela ashukumayo anjengeYouTube. Kungenxa yoko le nto sifuna ukuba ubenolwazi olunzulu malunga nokuba iividiyo ezingama-360º zithini kwaye ungafumana njani uninzi lwazo kubo kwifowuni yakho ephathekayo.
Le ndlela intsha yokurekhoda isivumela ukuba senze umxholo osuka kolunye uluvo, ke kubalulekile ukuba wazi ukuba uqulethe ntoni. Sikwixesha lokwenyani, kwaye Amathuba aphosiweyo njengevidiyo ye-360º ayikho phakathi kwezicwangciso zeenkampani eziphambili.
Ngokwenyani iividiyo ezingama-360º kunye neNyaniso eyiNene zidibene ngokusondeleyo, kangangokuba iitekhnoloji zinokudityaniswa, oko kukuthi, ividiyo erekhodwe kwi-360º inokulungiswa ukuze ukusebenzisa iiglasi zeNene ebonakalayo sibe namava apheleleyo, ngokungathi amehlo abo babekwindawo apho kubhalwe khona umsitho, kuguqula amava okujonga okudala abe ligeza lomntu wokuqala. Abo kuthi banethuba lokuvavanya umxholo kwiNyani eyiyo ngeendlela ezahlukeneyo Siyazi kakuhle ngamathuba exesha elizayo okurekhodwa okungama-360º, kwaye kungonwaba kangakanani kubasebenzisi abaninzi.
Ke, Iividiyo ezingama-360 kwaye iNyaniso eyiyo iyasivumela ukuba siqhubeke inyathelo, umsebenzisi angadibana nevidiyo kwaye azame ngento abonayo. Yimeko yokujonga ekuntywiliselweni kude kube ngoku ingadumanga ngenxa yokusikelwa umda kubuchwephesha. Ukongeza, umsebenzisi uneendlela ezahlukileyo zokuba asebenzise ividiyo ye-360º, ngakumbi ngoku ekubeni sinetheminali yamandla aphezulu ezipokothweni zethu, mhlawumbi kwezi meko sinokuthi umda ubekwe ngokwenyani yengcinga yethu.
1 Uyibukela njani iividiyo ezingama-360º ngeselula yakho
2 Uyibukela njani iividiyo ezingama-360º ngeiglasi eziyinyani
3 Izicelo zokujonga iividiyo ezingama-360º kunye neNyani eyiyo
4 Ndingazibukela iividiyo ezingama-360º kwi-PC yam?
5 Indlela yokurekhoda ividiyo eyi-360º
Uyibukela njani iividiyo ezingama-360º ngeselula yakho
Iifowuni eziphathwayo zizizixhobo ezibeka ezona ngxaki ikakhulu xa kufikwa ekubukeni iividiyo ezingama-360º, nangona kunjalo, enkosi kwizicelo ezinje ngeYouTube nakuFacebook ngokuya zibandakanyeka nomxholo ongu-360º, kulula ukuzibona. Sifuna i-smartphone yethu ukuba ibe nezixhobo ezithile zokubukela iividiyo ezingama-360ºEzi zixhobo ezithile ziyi-gyroscope, isivamvo esiqhelekileyo, esivumela isikrini ukuba sijikeleze ngokuzenzekelayo xa sihambisa ifowuni. Nangona kunjalo, ezinye iitheminali ezindala ezindala azinayo le sensor, kwaye ngelishwa ngaphandle kwe-gyroscope awuyi kuba nakho ukujonga ngokuchanekileyo iividiyo ezingama-360º, kuba i-gyroscope iyasivumela ukuba sizikhokele kwividiyo efumana intshukumo.
Asinakho ukufikelela kwiividiyo ezingama-360º ukuba singena kuFacebook okanye kuYouTube kwizikhangeli zomntu wesithathu, kunye nayo nayiphi na ikhonkco esinokufikelela kuyo ngokuthe ngqo kwi-Twitter okanye usetyenziso olufanayo. Ngokusisiseko sinokufikelela kuphela kolu hlobo lomxholo ngokusebenzisa usetyenziso oluhambelana ngokupheleleyo, ke siyacebisa ukuba xa unengxaki, uye ngqo kubanikezeli bomxholo ngokusebenzisa izicelo zabo ezisemthethweni, yeyona ndlela ilungileyo yokuqinisekisa ukusebenza kwevidiyo eyi-360º i-smartphone.
Uyibukela njani iividiyo ezingama-360º ngeiglasi eziyinyani
Zininzi iiglasi eziyinyani zenyani zentengiso eziya kukuvumela ukuba ujonge lo mxholo u-360º kwimo eyiyo eyiyo. Luphawu olwahlukileyo kwezi vidiyo, ezinokuthi ziguqulwe zibe yiNene ebonakalayo ngezi glasi. Ukubona iividiyo ezingama-360º ziguqulwe zayinyani, kuya kufuneka sisebenzise imo yeNyaniso ebonakalayo kwiYouTube, iqhosha elivela ezantsi njengaleyo iboniswe kumfanekiso ophezulu. Nje ukuba sisebenze imo yeNyaniso eyiNene, kuya kufuneka sivule isiciko esinikwa ziiglasi ze-Virtual Reality, apho siza kubeka khona iselfowuni kwaye siqhubeke nokuyivala.
Nje ukuba sibe ngaphakathi singamisela iilensi, kwaye sinokujonga ividiyo. Enkosi kwi-gyroscope yefowuni kunye neelensi zeglasi eyiyo eyiyo, Siza kuziva ngathi ngaphakathi kwevidiyo, kuba xa sihambisa iintloko zethu ividiyo iya kuhamba kwaye siya kuba nakho ukubona yonke into ejikeleze thina, kwaye le yindlela oveliswa ngayo umlingo. Le yeyona ndlela ilungileyo yokukwazi ukwenza ividiyo kwinyani ebonakalayo ngeefowuni eziphathwayo, kunye nokusonjululwa okungaphezulu kwepaneli kunokuba ngcono, kuba ngaphantsi kwe-1080p ye-FullHD yeengxaki ziqala ukuqatshelwa.
Izicelo zokujonga iividiyo ezingama-360º kunye neNyani eyiyo
Kukho izicelo ezininzi, kodwa ezona ziphambili esiza kukunika zona kwiActualidad Gadget zezo basiqinisekisa ngobuncinci bomgangatho womxholo:
YouTube: Ngaphakathi kwecandelo le360Video kwiphaneli esecaleni.
Facebook: Ineevidiyo ezingama-360
Yinyaniso: Ukusetyenziswa okunomxholo wevidiyo kwinyani ebonakalayo ye-Android.
Kwaye inyani kukuba iYouTube lelona qonga liphambili apho siza kufumana owona mxholo uphezulu weyona nyani okanye iividiyo ezingama-360º.
Ndingazibukela iividiyo ezingama-360º kwi-PC yam?
Ngempumelelo, Uyakwazi ukujonga zombini iifoto kunye neevidiyo ezingama-360 on kwi-PC yakho, nangona kunjalo, okwangoku kuphela I-Safari, i-Chrome kunye neMozilla Firefox iya kusivumela ukuba sinxibelelane ngokuchanekileyo nale nkqubo. Xa sizifumana sikufacebook ngokomzekelo ngevidiyo engu-360º, kufuneka siyivelise kwakhona, kwaye xa sicofa imouse, singenza intshukumo eqhelekileyo yokutsala eya kusivumela ukuba sihambe ngeendlela ezahlukeneyo ezisinika zona, a iphelele, njengoko kungenakuba njalo, amakhulu amathathu anamashumi amathandathu amadigri. Ke ngoko, ukusuka kwi-PC yethu ngeYouTube nakuFacebook siza kuba nakho ukufikelela kolu hlobo lomxholo. Ukuba sineeglasi eziyinyani njengeHTC Vive okanye iOculus Rift, uya kuba nezakho izicelo.
Indlela yokurekhoda ividiyo eyi-360º
Sineendlela ezizezinye zokukhetha ukurekhoda iividiyo ezingama-360, kwaye ayizizo zonke eziza kunyanzela ukuba siye kwizinto ezizodwa:
Umanyano lwekhamera kunye nokuhlelwa kweposti yevidiyo: LINK
Izixhobo zefowuni yethu ephathekayo njenge-MUVI X-LAPSE evela eVeho
Ezona khamera zibalaseleyo zokurekhoda i-360º
Kwaye ezi zezona ndlela zintle zokurekhoda iividiyo ezingama-360º, nayo yonke into odinga ukuyazi malunga nale teknoloji ikhethekileyo kunye nezinto ezintsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Iividiyo ezingama-360º kwiselfowuni, yonke into ekufuneka uyazi ngayo